Rasmi: Akshay Kumar oo amar ku bixiyay duubista Housefull 4 in la joojiyo iyo in Sajid Khan la baaro!! – Filimside.net
Rasmi: Akshay Kumar oo amar ku bixiyay duubista Housefull 4 in la joojiyo iyo in Sajid Khan la baaro!!
Naxdin hor leh ayaa Bollywood-ka ka socoto maanta waxayna ceeb oo idil ku hareereesan tahay Director Sajid Khan oo xaalka ku yahay kadib markii labo atirisho Saloni Chopra & Rachel White ku eedeeyeen tacadi faraxa xumeyn ah iyo ku qasbi galmo uu kula kacay asigoo awoodiisa filim sameeyonimo adeegsanayo!
Haatan Superstar Akshay Kumar ayaa qoraal rasmi ah soo saaray kuna amray soo saare Sajid Nadiadwala iyo shirkadiisa Nadiadwala Grandson gabi ahaanba inay hakiyaan duubista Housefull 4 ilaa wax walbo laga xaqiijinayo.
Akshay Kumar bartiisa Twitter-ka wuxuu kusoo qoray “Hadda ayaan kusoo laabtay gaar ahaan xalay waxaana wargesyada ka aqriyay aqbaaraad aad uu niyad dileen.
Waxaan ka codsaday soo saarayaasha Housefull 4 inay gabi ahaanba joojiyaan duubista filimkan ilaa baaritaan dheeraad ah laga sameenayo.
Arinkan waa wax u baahan baaritaan adag in la sameeyo. Lama shaqeyn doono qof walbo oo ku cadaato inuu dadka dulmiyo sidoo kalena waxaa muhiim ah kuwa tacadiga loo geestay in la dhageesto lana siiyo cadaalada ay u mudan yihiin ama u qalmaan.”
Akshay Kumar waxaa kasoo yeeray hadal cad oo uu ku taageerayo Me Too Movement oo ah olo olo lagu dhiiri galinaayo dumarka gaboodka falka jinsiga ku saleesan ay u geesteen dadka awooda badan inay banaanka kusoo dhigaan.